Njengoba iLinux isivalelisa unomphela | Kusuka kuLinux
Kungokuzisola okukhulu ukuthi kufanele simemezele ukuthi kufanele sisuse ngokungalindelekile i-DesdeLinux ekusakazweni. Kunezimbangela eziningi eziholela ekutheni sithathe lesi silinganiso:
Asinaso isabelomali sokuqhubeka nokugcina ukusingathwa nesizinda.
I-ISP yethu ngeke ilahle ukuxhumana kuze kube phakade (ngaphandle kokuthi siguqule imisebenzi).
Sithole izikhalazo eziningi ezivela kubasebenzisi bethi lokho esikushicilelayo akusebenzi.
Ukukubeka phezulu, ngivele ngaziswa ngakho GoDaddy ukuthi bazosinika isobho le-SOPA lokwephula i-copyright.
Uma singasusi yonke iminonjana yale bhulogi, noma okungenani izindatshana ezephula eminye imithetho, basifaka icala lokuthi, okungenani kimi, bazosusa izinwele ezincane engizishiyile.
Ngakho usale kahle. Uma emahoreni ambalwa bengakwazi ukufinyelela ku-FromLinux bazokwazi izimbangela.
»Kuyafisa ukwazi ukuthi usuku olubuhlungu kangaka, lapho kwabulawa khona izingane eziningi ezineminyaka engaphansi kwemi-2, luthathwa kanjani eNtshonalanga yomhlaba njengento yokuhlekisa ngabo» Noma kunjalo .. Usuku Olujabulisayo luka-Ephreli.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Njengoba iLinux isivalelisa ingunaphakade
xD, ukufunda nje into ye-goDaddy kususe ukwethembeka kokuthunyelwe. Noma kusho ukuthini ukuthi "Indawo yethu eku-A2Hosting"
Ukubingelela nosuku olujabulisayo.
Akunjalo. Ukusingathwa kungu-a2hosting, kepha isizinda sathengwa kwaGoDaddy 🙁
Abayi ku "bicotear"?
hahaha usuku olujabulisayo luka-april ols
Kuyadabukisa kanjani, bengibhalisela izinyanga ngifunda izindatshana zakho, uzolahlekelwa kakhulu ...
I-ISP yethu ngeke isuse
Futhi i-S engekho?
Akukho S okulahlekile. Ngabe kuzofanele sikuchazele konke? ¬¬
Inkulumo eyenziwe kahle izobukeka kanjena
I-ISP yethu nos izosusa ukuxhumana kuze kube phakade
Ukuba yihlaya nje akusho ukuthi kufanele usebenzise i-HOYGAN
«I-ISP yethu CHA izosusa ukuxhumana kuze kube phakade .. »
Ingabe kunzima kakhulu ukuqonda leso siqephu somkhuleko? Yilapho ihlaya likhona. Umqondo ngukuthi kubonakala sengathi kuzosinqamula lapho empeleni kungenjalo ... (noma ngithemba: D)
ukuthi bekufanele kube ucezu olude ... 😮
Angiqondi le nkulumo ngoba abantu abadala banolwazi oluningi ekufundeni ukuqonda kwemishwana
@Isibindi: Awumqondi ngoba akazange abhale kahle. Leyo ncazelo ayinikeze izaba nje zokungayivumi. i-xD
Co .. Isibindi nangelanga labangcwele abamsulwa ulokhu ujikijela amatshe, hahahahaha.
Angisiye umuntu ohlekisayo esishoyo ukuthi, phakathi kokunye kaningi uma ngithola ngiyacasuka, futhi nangaphezulu ngegxathu nokukhathala enginakho namuhla
Ngokuyinhloko, uyathanda ukugoba kepha ungakuchobozi kahle? I-LOL…
Futhi akunjalo, ngiyazi ukuthi akukho okwenzekayo uma ngenza lezi zinto lapha kepha angizenzi lezi zinto laphaya kuwo wonke umuntu ngoba ukuvimbela kungcono kunokwelapha
Ah! Namuhla nginqume ukuyeka ukusebenzisa i-Linux ingunaphakade ... Awusiboni isithonjana sami seWindows? Lokho kusho ukuthi ngizohlala ngishiya iLinux (ngemuva kokuyisebenzisa iminyaka emihlanu) neMacOSX ngemuva kokuba yisithandwa sami kusukela ngo-1990.
Hhayi, kubi kakhulu nakuwe .. Ngicabanga ukuthi nami ngizovakashela iWindows endala, esivele iphakathi kweDebian neArch ngicikekile
Ngivalelisa kubo bonke abangane, ngizoba yi-CEO entsha yeMicrosoft, bye linux
Ngijabule kakhulu ngibona iphenguwini ... Ha Ha Ha
@ pandev92… Umlayezo womngane wethu esimthandayo uBill Gates.
Into yokugcina esele kwi-laptop yami ye- "Windows Low Vista" ilebuli yelayisense le-OEM. Kube yintokozo ukuyidabula.
Kuyiqiniso, akuyona ihlaya. I-LOL
Ungakhathazeki, sinqume ukudala i-.abxdoc entsha, ifomethi ekhetheke kakhulu ukuthi alikho elinye ihhovisi elingayifunda, ngaphandle kwehhovisi le-microsoft elisha 😀
[…] Into yokugcina esele ku-laptop yami ye- “Windows Low Vista” kwaba ilebuli yelayisense le-OEM. Kube yinjabulo ukuyidabula. […]
XD XD XD ngiqala ukuhleka XD
Okomzuzwana ngifikile ukungabaza ukuthi bekungenacala ngempela ... kepha ngibona ukuphawula kokugcina kwe- izinga Angingabazi ...
lokhu umsulwa !!! hehehehe
Phew !!! uvalo olunjani onginike lona amaswidi! i-xDDD
Zama kahle !! kepha ayihluphi !!!! ha ha ha ha ha ha
Ngalunywa… futhi inhliziyo yami yeqa isigqi «futhi ngiyaphi manje ne-arch + kde yami esanda kufakwa?
ufff ... ibuye yawa ne-XD
Sikufisela usuku oluhle luka-Ephreli weziwula
Kusukela ekuqaleni angizange ngilume ngoba ngangazi ukuthi kunaluphi usuku namhlanje xD
Namuhla sengivele ngawela kabili kwamanye amahlaya, kulokhu angiwi xd ..
Hewu Nkosi yami!
Bengizobabhalela ngibatshele ukuthi ngeke bangizame kakhudlwana kimi, ukuthi ngizobuyela komuncu kodwa njengoba behamba ngifuna ukubakhuthaza ukuthi babuyele ohlangothini olumnyama lokuthi kunezinkulungwane zama-BSOD abalindile .
Sikufisela usuku oluhle luka-Ephreli weziwula !!!
Futhi bengifuna ukukucela ukuthi ungivumele ngibe yingxenye yabasebenzi bakho ukushicilela okuqukethwe kwe-Linux kuleli khasi elihle kakhulu 🙁
I-Perooo inhle kusukela (T. T)
bahh, uma kungenxa yeGoDaddy, sonke sikhululekile ngokwanele ukuthi singafaka i-ip ngqo (?).
Usuku oluhle luka-Ephreli Fools D: (uwile njengezindaba ezi-3 namuhla <_ <)
Okwesikhashana ngangikukholwa kepha angizange ngikunake ngaze ngakhumbula ukuthi namuhla bekuwusuku hahahaha
Ngeke ngiphinde ngiwafunde, manje ngingu-macboy hahahahaha
Mina noHahaha ebengicabanga ukuthi ukunyathelwa phansi kuzoba yi-xD encane
Kubi kakhulu ukuthi ihlaya lika-Ephreli Fools.
O, ngiyibone iza ... kahle, kuyihlazo, ngibuyela kuMuyWindows, ukuthi le nto yeLinux akuyona into yami ...
Sala kahle kubo bonke abantu, futhi ngikufisela inhlanhla kokulandelayo ... 😀
Ngabe kuliqiniso noma kungamanga ... ungangisabisi ...
LOL! Kumele ubone ukuthi idwala lijabule kangakanani ngokungabaza ...
HAHAHAHA yebo, akuyona yonke into engaba izindaba ezibucayi angithi? ... kufanele unikeze injabulo nokuphila kulokhu 😀
Be sekwephuzile: U-S wayematasa kakhulu esithangamini se-TT
Sikufisela usuku oluhle lwe-April Fools Day XD
Yebo hahaha ngiyabona, hlola umugqa wakho wesikhathi 😀
Isikhathi esincane lapho ungena kuleli khasi, kuvele iphutha elingu-500. Ngalikholwa.
Hahaha ithuba elimsulwa .. Sibe phansi imizuzu engaphezu kwengu-30 ..
Ngokungaqondile ihlaya laphuma kahle. XD
Ngenhlanhla bengingekho lapha ngenkathi lokho kwenzeka ... kepha bengithukuthele HAHA
Yeka ukunengeka! Kusukela kulo mzuzu ngiphinde ngilahle isoftware yamahhala ngiye ngokushesha ku- «okulandelayo, okulandelayo nokulandelayo». . . . heh heh